गीतकार दिलिप योन्जन तामाङको “हावा बनी छुए तिमीलाई” गीतको भिडियो सार्बजानिक
६ साउन, काठमाडौँ । गीतकार दिलिप योन्जन तामाङको “हावा बनी छुए तिमीलाई” गीतको भिडियो सार्बजानिक भएको छ । गायक युवराज चौलागाईको स्वर रहेको यो म्युजिक भिडियोले धेरै दर्शकको मन जित्ने देखिन्छ । युवा युवतीमा उत्पन्न प्रेमका भावहरु समेटिएको नयाँ आधुनिक गीतको म्युजिक भिडियोमा गीतकार दिलिप योञ्जन तामाङको शब्द रचनामा रहेको गीतमा राजेश थापाको सुमधुर संगीत रहेको छ भने गीतमा […]
गीतकार दिलिप योन्जन तामाङको “आफ्नै छायाँले” गीतको भिडियो सार्बजानिक
६ साउन, काठमाडौँ । गीतकार दिलिप योन्जन तामाङको “आफ्नै छायाँले” गीतको भिडियो बजारमा दुई हप्ताअघि सार्बजानिक भएको छ । मेलिना राईको सुमधुर स्वर रहेको यो म्युजिक भिडियो धेरै दर्शकको मन जित्ने देखिन्छ । उक्त गीतमा दिलिप योन्जन तामाङको शब्द, मेलिना राईको स्वर र राजेश थापाको संगीत रहेको छ । उक्त गीतमा बिरेन्द्र नौभागयको निर्देशन रहेको छ […]
६ साउन, काठमाडौँ । चलचित्र नगरी निर्माणका लागि भारतको एक टोलीले गोरखाको पालुङटार र धादिङको सल्यानटारको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । भारतका एक्सेल ग्रुपका प्रमुख तथा जी इन्टरटेन्मेन्ट इन्टरप्राइजेज लिका अध्यक्ष सुवास चन्द्रा, भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्व अमर सिंह तथा वरिष्ठ सिने कलाकार जया प्रदासहितको टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि काठमाडौँ फर्केर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भेट गरेको […]
६ साउन, काठमाडौँ । ‘करोडौँ मुटुहरुको ढुकढुकी नेपाल……’ जस्ता अमर गीतका गायक स्वर्गीय अरुण थापामगरको उचित सम्मान हुन नसकेको शनिबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले बताउनुभएको छ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका चम्किला नक्षत्र स्व अरुणको १९ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा अरुण स्मृति संगीत पुरस्कार–२०७४ वितरण समारोहमा उहाँहरुले स्व अरुणको स्मृति दिवस मनाउन सरकारले कुनै चासो नदिएको […]
१ साउन, काठमाडौँ । नौ डाँडा काटेर पारि छोडी आयाँ लमजुङको घरबारी लमजुङ तुर्लुङकोट सररर…..हावा चल्यो लाँकुरीको बोट । असंख्य लोकगीत गाएर नेपाली लोकपारखीमाझ ख्याति कमाएकी बिमाकुमारी दुरा पछिल्लो समय गायन क्षेत्रमा त्यति सारो देखिनुहुन्न । ‘छुट्यो मायाजाल’, ‘खैरेनीमा गेट’, ‘वनको काफल वनकै चरीलाई’, ‘फुल्यो निमपत्ता’ र ‘सररर पानी घट्टामा’ जस्ता कैयन् कालजयी गीतले दुरालाई […]
२४ असार, काठमाडौँ । मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय गीत प्रतियोगितामा सहभागी भएकाहरुमध्येबाट पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट १० गीत छनोट गरिएका छन् । गत वैशाख १५ देखि जेठ १५ गतेसम्म सार्वजनिक सूचना गरी गीत आह्वान गरिएकामा प्रतियोगितामा समाविष्ट २०० गीतमध्येबाट निर्णायक समितिले १० गीत छनोट गरेको हो । उत्कृष्ट १० मा परेका गीतकारहरुमा […]
२२ असार, काठमाडौं । हिमाली कथाबस्तुमा बनेको चलचित्र म्हेन्दूको फस्टलुक पोस्टर सार्बजानिक भएको छ । चलचित्रका निर्माता अर्जुन डोटेलले आफ्नो फेसबुक मार्फत चलचित्रको पोस्टर सार्बजानिक गरेका हुन् । सार्बजानिक पोस्टरले हिमाली जनजीविका र प्राकृतिक सौन्दर्यलाइ उठान गरेको छ । डोल्पाका विभिन्न स्थानमा छायांकन गरिएको चलचित्रले डोल्पाका स्थानिय बासिन्दाको अवस्था र भोगाइलाई चित्रण गरेको निर्माता डोटेलले बताएका छन् […]
बेहुला–बेहुलीलाई अग्नीको अगाडि किन खुवाइन्छ कसम ?
हिन्दु धर्मको १६ संस्कार मध्ये एक विवाह हो । विवाहमण्डपमा पुरोहितले इश्वरलाई साक्षी राखेर केटा–केटीको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने चलन रहिआएको छ । वैवाहिक समारोहमा आगो वा अग्नीको अगाडि बेहुला–बेहुलीलाई सात पटक घुमाएर वाचाकसम खुवाउने गरिन्छ । आगो वा अग्नीको अगाडि घुमाएर वाचाकसम खुवाउनुको पछाडिका कारण निम्न छन् : १. अग्नीको वेद र शास्त्रमा […]
श्रीदेवीकी छाेरी जान्हवीकाे डेब्यू फिल्म ‘धडक’ को ट्रेलर सार्वजनिक
१२ असार, काठमाडौं । दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीकी जेठी छोरी जान्हवी कपूरको डेब्यू फिल्म ‘धडक’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यो फिल्म प्रेम कहानीमा आधारित छ । जान्ह्वी कपूरको जोडीको रुपमा ईशान खट्टर रहेका छन । ईशान खट्टर अभिनेता साहिद कपूरका सौतेनी भाई हुन् । यो फिल्ममा राजस्थानका एक जोडीको प्रेमलाई देखाइएको छ । दुवैले […]
‘भैरे’ को ट्रेलर यस्तो छ (भिडियोसहित)
११ असार, काठमाडौं । साउन ४ गते रिलिज हुने नेपाली चलचित्र ‘भैरे’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । अभिनेता दयाहाङ्ग राईको प्रमुख भूमिका रहेको यो चलचित्रको ट्रेलर रिलिज भएको हो । चलचित्रका कलाकारहरु दयाहाङ्ग राई, सुरक्षा पन्त, वर्षा सिवाकोटी, विक्रान्त बस्नेत लगायत र निर्माण टिमको उपस्थिति थियो । ट्रेलर प्रेम, रोमान्स, कमेडी र एक्सनले भरिएको छ […]
‘मनको कुरा’ गीतको भिडियो सार्वजनिक
१० असार, काठमाण्डौ । गायक भरत लिमेल मगर र रीना बोगटीको आवाजमा रहेर्को ‘मनको कुरा’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ब्याकुल माइलाको शब्द र मिलन तिमिल्सिनाको संगीत रहेको छ । उक्त गीत विशन मानन्धरको एरेन्जमा रहेको छ भने, बन्दना लामा र भीम आले मगरको अभिनय रहेको छ । खोटाङ जिल्ला बाराहपोखरी गापा पिप्लेमा जन्मिएका […]
गीतकार राजु थापाको गीति एल्बम ‘शब्द ब्यारेक’ बजारमा
२९ जेठ, काठमाडौँ । भारतीय सेनामा कार्यरत गीतकार राजु थापाको गीति एल्बम ‘शब्द ब्यारेक’ बजारमा आएको छ । पन्ध्र वर्षदेखि गीत सिर्जनामा रमाउँदै आउनुभएका थापाको उक्त एल्बममा ‘यो साल पनि’, ‘कुवाको पानी’, ‘तिम्रो बिहे’, सधैँ हतार’, ‘अ‍ैले त अल्लारे’, ‘आमा’, ‘नटाढिनु है’, ‘सुख दिन नसकेनी’, ‘हैरान पार्ने’, ‘धनको गरीब भए पनि’ जस्ता १० वटा गीत समावेश […]
रिजुले जितिन् ‘मिस नेवा’ उपाधि
१४ जेठ, काठमाण्डौ । १३ औं ‘मिस नेवाः ११३८’ को उपाधि रिजु मानन्धरले जितेकी छन् । आफ्ना १६ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै ताजसहित २० हजार रुपैया साथै विभिन्न उपहार पाइन् । नेप्लिज फेसन होमले नेवार समुदायका युवतीको सांस्कृतिक प्रतिभा प्रदर्शन गर्न आयोजना गरेको प्रतियोगितामा विजेता रिजुले विधागततर्फको ‘पब्लिक च्वाइस अवार्ड’ पनि सुरक्षित गरिन् । प्रतियोगितामा […]
‘तिमीले माग्छौ भने’ बोलको गीत सार्वजनिक(भिडियोसहित)
१४ जेठ, काठमाण्डौ । फिल्म ‘चि मुसी चि’को फिल्ममा समावेश ‘तिमीले माग्छौ भने’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौँमा आइतबार कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा अञ्जु पन्त र युवराज चौलागाईँको स्वर छ भने सुरज अधिकारीको शब्द तथा संगीत रहेको छ । कलाकार सुनिल क्षेत्री र अलिशा शर्मा फिचर गरिएका छन् । दुवैले […]
विश्वकप फुटबल २०१८को थिम ‘कलर्स’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
१ जेठ, काठमाण्डौ । फिफा विश्वकप फुटबल २०१८ का लागि कोकाकोलाले आफ्नो प्रायोजित थिम ‘कलर्स’ नामक गीत सार्वजनिक गरेको छ । कोकाकोला एन्थम नाम दिइएको यो गीतमा लेखन तथा गायन अमेरिकी पप स्टार जेसन डेरुलोको छ । बोटलर्स नेपालले आइतबार निकालेको विज्ञप्तिका अनुसार गायक जेसन डेरुलोले यो भिडियो आफ्नो जन्मभूमि हाइटी पुगेर तयार गरेका हुन् […]
धमलाको पहिलो गीत ‘हाँसिरहनु सधैँ तिमी’ सार्वजनिक(भिडियोसहित)
३१ वैशाख, काठमाण्डौ । विजयकान्त धमलाको पहिलो गीत ‘हाँसिरहनु सधैँ तिमी’ सार्वजनिक भएको छ । यस गीतमा नवीन कार्कीले स्वर दिएका छन् भने लीला श्रद्धाको संगीत र सुदीप सागरको संगीत रहेको छ । सन्नी रसाइलीलगायत टिमले अभिनय गरेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो:
नेता खोक्रो भाषण गर्छ स्रिफ भोटका लागि
नेता खोक्रो भाषण गर्छ स्रिफ भोटका लागि ! गुन्डागर्दी बड्दै गाछ कालो नोटका लागि !! खुलेआम लड्दै गाछन आजकालका केटाहरु ! स्रिफ तिनै तरुणीका आँखा र ओठका लागि !!
अशोक दर्जीको ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन’ सार्वजनिक(भिडियोसहित)
२७ वैशाख, काठमाण्डौ । बालगायक अशोक दर्जीको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । बिराज नेपालको शब्द रहेको यो गीतमा सङ्गीत गायक तथा सङ्गीतकार टंक बुढाथोकीको रहेको छ। म्युजिक भिडियोमा टंक बुढाथोकी र दर्जी आफै देखिएका छन्। ﻿
बलिउड अभिनेत्री करिश्मा काठमाण्डौमा
२४ वैशाख, काठमाण्डौ । बलिउड अभिनेत्री करिश्मा कपुर १५ वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा काठमाण्डौ आएकी छिन् । सोमबार विहान ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएकी करिश्माले आजै मेरिगोल्ड ज्वेलर्सको दरबारमार्गमा खुलेको शाखाको रिबन काटेर उद्घाटन गरेकी छिन् । मेरिगोल्ड ज्वेलर्सकी संचालिका ज्योत्सना श्रेष्ठका अनुसार करिश्मा ज्वेलरी उद्घाटनकै लागि काठमाण्डौ आएकी हुन् । करिश्माले आफू १५ बर्ष […]
चलचित्र ‘हैरान’को ट्रेलर रिलिज
२४ वैशाख, काठमाण्डौ । फिल्म ‘हैरान’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । जेठ ४ गतेवाट प्रदर्शनमा आउने कमेडी संबाद र दृश्यलाई बढी प्राथमिकता दिइएको यस ट्रेलरमा फिल्मका सम्पूर्ण कलाकारहरुलाई समेटिएको छ । कमेडी जनरामा निर्माण भएको फिल्मलाई विश्वकै कान्छा निर्देशक सौगात विष्टले निर्देशन गरेका छन् । डेब्यु फिल्म ‘लभ यु बाबा’मार्फत नै सौगात विश्वका कान्छा निर्देशक […]